Toko 78 — Ny Herin’ny Vavaka | EGW Writings
Toko 77 — Vavaka, Hery ho AntsikaToko 79 — Ny Fahazarantsika amin’ny VavakaToko 80 — Finoana sy VavakaToko 81 — Ny Lanjan’ny Fianarana ny BaibolyToko 82 — Mitrandraka ny Soratra Masina ho an’ny TenaToko 83 — Maharitra amin’ny Fianarana ny BaibolyToko 84 — Tambin’ny Fianarana Voatariky ny BaibolyToko 85 — Ny Baiboly, MpampianatraToko 86 — FanajanaToko 87 — Fanantenana Miorim-Paka
Teo an-tendrombohitra, akaikin’Andriamanitra i Mosesy no nandray ny môdelin’ny Fitoerana Masina. Teo koa no namitranana ny fihavanana tamin’Andriamanitra ka nahafahan’ny olombelona nandray ny idealy feno voninahitra. Amin’izay ohatra izay dia afaka mitaratra ny toetsika isika mba hahatanterahan’ny toky lehibe. (2 Kôr. 6:16)HAT 217.1
Alohan’ny hiatrehana ny andraikitra andavanandro dia tokony hanandratra ny fanahy amin’ny vavaka isika. Io fanandratana mangina io dia ho toy ny fofo-manitra eo anatrehan’ny seza fiandrianan’Ilay Be Voninahitra, ary mandrava ireo fandrik’ilay fahavalo. Ny Kristianina miray fo amin’Andriamanitra dia tsy ho resy. Tsy misy afaka mandrava ny fiadanany. Ireo tokin’ny Tenin’Andriamanitra, ny herin’ny voninahitr’Andriamanitra, ny loharanon-keriny rehetra dia antoka ho fanavotana antsika. Toy izany no niarahan’i Enôka tamin’Andriamanitra. Andriamanitra no tokiny sady tsy nanary azy tamin’ny andro mahory.HAT 217.2